Adoolessa 23, 2021
Mooraa baqattoota Maay Ayinii fi Addi Haruushaa keessa kan jiran baqattonni Ertraa achii ba’anii iddoo biraa deemuu kan fedhan ta’an iyyu kan hin ehamamneef ta’u Ejeensii godaantootaa fi dhimmi godaantoota deebi’anii kan Itiyoophiyaaf daayreekteera kutaa qunnamtii fi hariiraa alaa kan ta’an Obbo Baqaal Nigusee ibsanii jiru.
Mooraa sana keessaa meeshaalee gurguddoon camadamanii akka jiran kana malees achuuma mooraa keessaa dhukaafama jedhan.Kana malees hidhattonni eega achi seenanii booda gargaarsii raabsamu dhaabatee dawaaleen saamaamanii buufanni fayyaa tajaajiila kennaa akka hin jirre Ambulaansiniis fudhatamniiru jedhan Obbo Be akaal.
Sagantaan nyaata addunyaa kuusaalee gargaarsaa qabu saamamee baqattonni yeroo ammaa tajaajiila tokko iyyu argataa akka hin jirre waluumaagala mooraa baqattootaa tajaajiila waraanaaf olee, baqattonni akka maallaqa walitti qabaniif dirqiisiifamaa , wal’ansa fayyaa dhabuu fi rasaasaan haleelamanii baqattonni du’an akka jiran ibsameera.
Haadholiin iddoo silaa ta’u hin malleetti mucaa da’u kanas hawaasnii addunyaa itti birmachuu qaba jedhan jechuun yonaataan Zbdiwoos gabaasee jira.
Gama kaanniin, humnootii Tigraayiin to’ataa jiran irraa ibsa dheengadda ba’e sabaa himaan dhiyaatee jedhame akka jedhutti, baqattoota Ertraa godaansaa fi haleellaam dhaqqabaa jiru akkaan kan isa yaaddeesse ta’u fi gocha gara jabinaa siviilootaa fi baqattoota irratti raawwatamee jedhanis hoggantummaa Tokkummaa Mootummootaan qorannaa gaggeessuun akka jalqabamuu gaafate jira.
Tigraay keessatti humanni weerara raawwate siviiloota irra kan geesisee sana baqattoota irrattis miidhaan ga’eera kan jedhu ibsii kun, seera mirga dhala namaa kan addunyaa keessatti dirqama ka’amee ba’uuf kan jiran ta’u aangawoonni ibsanii jiru.